ငါတို့ကိုသိစေရန် - ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုလူတိုင်းလက်လှမ်းမီစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်ဂျင်နီယာအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ကုန်သွယ်မှုကိုဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအားကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတန်ဖိုးကွင်းဆက်တွင်ပါဝင်ရန်အခွင့်အလမ်းများပေးအပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကားနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာ People တို့အကြားကွာဟချက်များကိုပေါင်းကူးပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထိုသို့ပြုကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ တည်နေရာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များ၏ကန့်သတ်ချက်များကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။
ရှုပ်ထွေးခက်ခဲမှုနှင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ကုန်ကျစရိတ်တို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်များများလွှမ်းမိုးနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ များစွာသောအရင်းအမြစ်များကိုကျူးလွန်သူများသည်ရလဒ်များကိုမကြာခဏမမြင်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြproblemနာကို WorldRef, one-stop ပူးပေါင်းဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်အဖြေရှာနေကြသည်။
တစ် ဦး ချင်းစီအားလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းကိုသူတို့၏စျေးကွက်ပြင်ပ၌လွတ်လပ်စွာချဲ့ထွင်နိုင်သည့်စွမ်းအားရှိသဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတန်ဖိုးကွင်းဆက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုဒီမိုကရေစီသို့ပြောင်းလဲချင်သည်။ သင်၏မြို့၊ တိုင်းပြည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌ကုန်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်သင်၌တန်ခိုးရှိသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ, ဒေသခံ Execution
WorldRef ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏ပြည်ပစျေးကွက်၏ထူးခြားချက်များအရသင်၏အရောင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနေရာချရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Glocalisation သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုထိရောက်စွာ၊ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအမှန်တကယ် "နိုင်ငံတကာ" ဖြစ်စေရန်သင်ပြုလုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။ မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ ကျနော်တို့ကပိုပြီးရိုးရှင်းအောင်၊ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့မြန်အောင်နဲ့လုံခြုံအောင်လုပ်နေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်း၏အရည်အသွေးကြောင့်သာမက၊ ၎င်းသည်သဘောထား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အသုံးပြုသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုမူဆက်ဆံပုံအပေါ်မူတည်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်တန်ဖိုးများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်အသင်းကိုအထိခိုက်မခံဘဲစစ်မှန်သောအထောက်အပံ့များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သူအားလုံးနှင့်အတူယုံကြည်မှုရှိသည်။ ငါတို့လုပ်သမျှအရာရာတိုင်းတွင်အလျှော့မပေးသောရိုးသားမှုနှင့်သမာဓိဖြင့်သတ္တိရှိရှိပြုမူဆောင်ရွက်သည်
ဆက်ဆံရေးနှင့်ယုံကြည်မှုကြောင့်စီးပွားရေးကိုအနိုင်ရသည်ဟုယုံကြည်ပြီးစျေးနှုန်းမှာဆင်ခြေသာဖြစ်သည်။ ဒါကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးတွင်ပိုမိုမှန်ကန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ တာဝန်ယူမှုရှိသောလုပ်ရပ်များနှင့်ရိုးသားသောဆက်ဆံရေးများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏စုပေါင်းစွမ်းအားကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုပိုမြန်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပြီးလူများကိုလေးစားစွာဆက်ဆံသည်။ အားလုံး, လူအပေါင်းတို့, သင်တို့နှင့်ပတ်သက်။ ပါ!
သိချင်စိတ် & သွက်လက်
စိန်ခေါ်မှုအသစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်အသစ်သောနှင့်တိုးတက်လာသောဖြေရှင်းနည်းများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစေ့စပ်ထားပြီးစိတ်အားထက်သန်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့နဲ့အလုပ်လုပ်နေစဉ်မှာသင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေပြည့်မီပြီးခေတ်ရေစီးကြောင်းသစ်တွေကိုစဉ်မှာယှဉ်ပြိုင်မှုထက်ပိုသာတဲ့စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်ဖို့အမြဲမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အမြဲတမ်းနည်းလမ်းရှာ!
ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအဖြစ်အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းမှုတိုင်း၌ထူးချွန်မှုထက်နည်းသောအရာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အခြေမထားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အမှားပြုမိသည့်အချိန်တွင်ပြောင်းလဲရန်ရဲစွမ်းသတ္တိရှိရန်မိမိကိုယ်ကိုရိုးသားစွာဝန်ခံရန်လိုအပ်ပါသည်။
မကြုံစဖူးအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင်ကွင်းများ setting ။ အကယ်၍ သင်ကစိတ်ကူးနိုင်လျှင်၎င်းကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း ၀ င်တစ် ဦး ချင်းစီသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလေသမျှအားသန်စွမ်းစေသည့်ကူးစက်ရောဂါဖန်တီးမှုကိုသယ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသစ်သောဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းအရှိန်အဟုန်ကိုထုတ်လုပ်ရန်ကျွမ်းကျင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလှဆုံးပစ္စည်းများကိုပေးခဲ့သည်။ - သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှု!
“ ဒီလူငယ်တွေဟာအဖွဲ့အစည်းကိုအရမ်းကျွမ်းကျင်စွာစီမံခန့်ခွဲနေကြတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးမှာလူငယ်လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်တွေလို့မထင်ရဘူး။ အဖွဲ့မှ Kudos ။ "
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ၊ ISGEC Heavy Engineering Limited, အိန္ဒိယ
"WorldRef အဖွဲ့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကောင်းမွန်သော Associate ကွန်ယက်တစ်ခုရရှိထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောတက်ကြွသောအဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ အရောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့် WorldRef သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ "
Budgeting Planner, PT Sanki Crane, အင်ဒိုနီးရှား
"ဒီလူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့ငါအတော်လေးကြာခဲ့ပါပြီ။ စီးပွားရေးနားလည်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပြည့်ဝမှုနဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးပုံစံဟာအတော်လေးအထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်"
"ကျွန်တော်ဟာ Hydro စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ WorldRef နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့ကဖောက်သည်ကိုပထမနေရာပေးရုံသာမကသက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်အောင်စီမံထားတယ်။ WorldRef နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအားရကျေနပ်မိတယ်"
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ PT Naluritama Engineering ၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
"WorldRef အဖွဲ့နဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်အပိုပစ္စည်းများနှင့်အခြားသွင်းကုန်လိုအပ်ချက်များအတွက်အမြဲတမ်းမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်"
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Astech Trading And Automatic Technique Company Limited မှဒါရိုက်တာ၊
"ကျနော်တို့က WorldRef နဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုမျှဝေရတာဝမ်းသာပါတယ်။
“ ကျွန်တော်ဟာ WorldRef နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနယ်ပယ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ကြပါတယ်။
အရောင်းဒါရိုက်တာ၊ Litostroj Power၊ ဆလိုဗေးနီးယား
"Syntek နှင့် WorldRef တို့သည်လျှပ်စစ်နှင့်စမ်းသပ်မှုနယ်ပယ်တွင်အလွန်ကောင်းသောစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုမျှဝေကြသည်။ စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုရှင်သန်စေနိုင်ပုံကို WorldRef ကနမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်"
ဒုတိယသမ္မတ PT PT Pacific Pacific Fiber အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ
"WorldRef ကမှန်ကန်သောဒေသခံမိတ်ဖက်များရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့နှင့်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်သည်"
တိုင်းပြည်မန်နေဂျာ၊ VA Tech Wabag, အင်ဒိုနီးရှား။
"ကျနော်တို့က WorldRef နဲ့အတူအစိတ်အပိုင်းများစွာအတွက်အလုပ်လုပ်နေတယ်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းကိုချီးကျူးထိုက်သည်"
"WorldRef ဟာအင်အားတောင့်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းပါ။ သူတို့ဟာအင်ဒိုနီးရှားမှာကာလရှည်ကြာစွာအရောင်းအ ၀ ယ်တွေလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ လူငယ်အသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ "
နည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးအကြံပေး၊ WorldRef Selling Associate, PT Menamas, Indonesia
ဘွိုင်လာဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ WorldRef၊ တွဲဖက်ရောင်းချသော Doosan ပါဝါစနစ်၊ အိန္ဒိယ
WorldRef သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးနယ်ပယ်အသီးသီးမှလူငယ်ပညာရှင်များကစီမံခန့်ခွဲသည်။ မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများအပေါ်သူတို့၏တုံ့ပြန်မှုများသည်အသုံး ၀ င်ပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် WorldRef အား၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတိုးချဲ့စေလိုသည်။
Tushar Sanyal ဖြစ်သည်
TSSK Consultancy & Engineering Services LLP မှဒါရိုက်တာ၊ အိန္ဒိယ
"WorldRef သည်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကြိုးစားသင့်သော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ သူတို့၏ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို ဦး တည်သည့်နည်းလမ်းသည်အမှန်တကယ်ချီးကျူးထိုက်သည်"
မန်နေဂျာ PT Megarindo Jaya၊ အင်ဒိုနီးရှား
"အလွန်ဖော်ရွေသောအဖွဲ့။ WorldRef သည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ထူးခြားချက်များကိုကောင်းစွာနားလည်သည်"
စွမ်းအင်အတိုင်ပင်ခံ၊ အလွတ်၊ ဗီယက်နမ်
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်မှု၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက် WorldRef ၏ထောက်ခံမှုကိုယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သတ်ဖြတ်မှုဟာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်။
Zulfikri တစ် ဦး
စီးပွားရေးဒါရိုက်တာ PT Testindo၊ အင်ဒိုနီးရှား
Worldref နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အပြုသဘောမှာဖောက်သည်များ၏ဝယ်လိုအားကိုနားလည်ပြီးလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်စီမံကိန်းကာလတစ်ခုလုံးအတွင်းနှင့်အကောင်းဆုံးကိုထောက်ပံ့ရန်ဖောက်သည်များနှင့်အဆက်မပြတ်အဆက်အသွယ်ပြုသည်။
စီမံကိန်းမန်နေဂျာ၊ ISGEC Heavy Engineering Ltd, India
WorldRef သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ကူညီပေးခဲ့ပြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမန်နေဂျာ - အရှေ့တောင်အာရှ၊ PT Larsen နှင့် Toubro, Indonesia
"WorldRef မှာအတော်လေးအာရုံစိုက်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။ သူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအရမ်းကျွမ်းကျင်ပြီးအချိန်ကုန်တယ်။ "
"ကျွန်တော်တို့ဟာ WorldRef နဲ့ Testing and Manpower ဒိုမိန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ သူတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရတာအံ့သြစရာကောင်းပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့အတွေ့အကြုံပါ။ သူတို့အဖွဲ့ဟာအလုပ်ကြိုးစားပြီးအာရုံစိုက်တယ်။ "
"WorldRef အဖွဲ့သည်ဒေသတွင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရာတွင်တာ ၀ န်ယူမှုရှိပြီးတာ ၀ န်ယူမှုရှိပြီးနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်"
"WorldRef အဖွဲ့ကကျွန်တော့်ကို Biomass စက်ရုံတွေမှာသူတို့ရဲ့ဗဟုသုတတွေနဲ့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ အဖွဲ့တစ်ခုလုံးဟာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုမှာအတူတကွအလုပ်လုပ်ကြပြီးသက်ဆိုင်သူအားလုံးအတွက် Win-Win အဆိုပြုချက်ကိုအမြဲတမ်းယူဆောင်လာကြသည်။ "
"အလွန်ဖော်ရွေ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အသည်းအသန်အသင်း။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေး၏နက်ရှိုင်းသောနားလည်မှုရှိခြင်း။ " "
WorldRef ရောင်းသူ၊ Freelancer၊ ဗီယက်နမ်
"WorldRef ဟာပွင့်လင်းမြင်သာပြီးရိုးသားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ WorldRef ကကျွန်တော့်ကိုဈေးကွက်မှာကြီးထွားဖို့ခိုင်မာတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေးခဲ့လို့ပါ"
WorldRef ရောင်းသူ၊ ဗီယက်နမ်
ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်အယူအဆအချို့တွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော dashboard များပါဝင်ပြီးသုံးစွဲသူများသည်လုံခြုံစွာကူးပြောင်းနိုင်ပြီးလက်တွေ့ကျသောသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်လျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးချွန်ဆုံးအသင်း ၀ င်တစ်စုသည်စက်ရုံအပိုပစ္စည်းများအတွက် Global B2B e-commerce ပလက်ဖောင်းကိုတည်ဆောက်ရန်အလုပ်များနေသည်။ ကောင်းသောအရာများလာမည့်ရှေးရှေးများမှာများစွာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စတင်ရန်မစောင့်နိုင်တော့ပါ!
Jaideep Singh ကမန်း
ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ် Amazement အရာရှိ
Vibe Manager & အရာအားလုံးခေါင်း။ Awesome
Navneet Singh က Siddhu
မီးသီးခဏ၏ Wizard ကို
ခဲဆိပ်ကုဒ် Wizard ကို